Isoftware Yokumaketha: Abadlali Abayinhloko Nokutholwa | Martech Zone
Amabhizinisi angaphezu kuka-142,000 asebenzisa i- isoftware ezenzakalelayo. Izizathu ezi-3 eziphezulu ukukhulisa imikhondo efanelekile, ukukhulisa umkhiqizo wokuthengisa, nokwehliswa kokukhangisa okuphezulu. Imboni yezentengiselwano ezentengiso ikhule isuka ezigidini ezingama- $ 225 yaya ku- $ 1.65 billion kule minyaka emihlanu edlule
I-infographic elandelayo evela ku- I-Marketing Automation Insider Imininingwane yokuvela kwesoftware yokuthengisa ezenzekelayo evela e-Unica eminyakeni eyishumi eyedlule ngokusebenzisa ukuthengwa okungabiza u- $ 5.5 billion okusilethele okwamanje, kufaka phakathi amapulatifomu wokumaketha alandelayo:
I-Act-On - Ipulatifomu lokumaketha elenzelwe ukukusiza ukuletha okuhlangenwe nakho okuvelele kumakhasimende akho. Kusukela ekwakhiweni kokuqwashiswa komkhiqizo nokufunwa, ukugcinwa nokwethembeka, ubuchwepheshe bethu bunikeza abathengisi ithuba lokugqama emncintiswaneni futhi baqhube imiphumela engcono.
Umkhankaso we-Adobe - Isethi yezixazululo ezikusiza ukuba wenze ngezifiso futhi uhambise imikhankaso kuzo zonke iziteshi zakho eziku-inthanethi nezingaxhunyiwe ku-inthanethi. Umkhankaso ungahlinzeka ngamaphrofayili wamakhasimende ahlanganisiwe, ukuqhutshwa komkhankaso wesiteshi esinqamula, ukumaketha kwe-imeyili kokuqukethwe kanye nokuphathwa kokuxhumana kwesikhathi sangempela.
Izixazululo Zokumaketha ze-IBM - Ingxenye yephothifoliyo ye-IBM Commerce, i-IBM Marketing Solutions ikuvumela ukuthi uhlanganyele namakhasimende akho ezingxoxweni ezifanele kakhulu, ezibandakanya kuzo zonke iziteshi zedijithali, zenhlalo, zeselula nezendabuko. Ungenza ngezifiso futhi uthuthukise imikhankaso enqamula isiteshi nemizamo yokumaketha yedijithali yokuguqula izivakashi zibe ngamakhasimende aphindayo nabameli.
Ukugeleza komsebenzi kweHubspot - Thuthukisa oxhumana nabo kanye namakhasimende ngokukhuliswa okusekelwe emgomweni, ukuhola amagoli, izaziso zangaphakathi, okuqukethwe kwewebhusayithi okwenzelwe wena, ukuqonda kwamagatsha, nokuhlukaniswa.
IBM Silverpop - Shintsha ukusebenzisana okwenziwe ngezifiso esikalini bese uletha imiyalezo enenjongo futhi efanelekile kuzo zonke izinyathelo kumjikelezo wempilo yamakhasimende.
Infusionsoft - Yakhelwe phansi ukuxazulula izinkinga ezinkulu zebhizinisi elincane. Uma ufuna izindlela ezihlakaniphile zokukala njengoba ukhula, ipulatifomu enamandla ye-Infusionsoft ingasiza. Phatha imisebenzi yansuku zonke eyehlisa ijubane — ngokuzenzakalela.
Marketo - Thola futhi bahlanganyele amakhasimende kwesokudla. Basize bafunde lokho abafuna ukukwazi ngemikhiqizo yakho njengoba beqala uhambo lwabo. Funda ngokukhangiswa kosesho, amakhasi okufika, ukwenza ngezifiso iwebhu, amafomu, imithombo yezokuxhumana, kanye nokulandela umkhondo wokuziphatha.
I-Microsoft Dynamics Marketing - Isixazululo esihlanganisiwe sokuphathwa kwezinsiza zokumaketha sokusebenza kokumaketha, ukuhlela, ukwenza, kanye analytics kuzo zonke iziteshi — i-imeyili, idijithali, ezomphakathi, i-SMS, kanye nokwendabuko.
I-Oracle Eloqua - Inika amandla abakhangisi ukuhlela nokwenza imikhankaso ngenkathi beletha umuzwa wamakhasimende owenzelwe bona ngamathemba abo. Imikhankaso ikala kakhulu izethameli kuziteshi zonke kufaka phakathi i-imeyili, ukusesha okuboniswayo, ividiyo, kanye neselula. Ngokulawulwa okuhlanganisiwe kokuhola nokwakhiwa komkhankaso okulula, isixazululo sethu sisiza abathengisi ukuthi bahlanganyele izethameli ezifanele ngesikhathi esifanele ohambweni lomthengi wabo. Amaqembu wokuthengisa angavala amadili amaningi ngesilinganiso esisheshayo, andise ukumaketha i-ROI ngokusebenzisa ukuqonda kwesikhathi sangempela.
Cloud Cloud yokuthengisa - I-Salesforce Marketing Cloud ivumela amabhizinisi anoma iluphi usayizi ukuthi akhulise ibhizinisi lawo ngokukhangisa nge-imeyili ezingeni lobuchwepheshe. Ngenkathi kungenjalo ngokuqondile isoftware ezenzakalelayo, ISalesforce Appexchange inayo ukuhlanganiswa okukhiqizwe nabaningi abahamba phambili be-Marketing Automation amapulatifomu.
ISalesforce Pardot - I-B2B Marketing Automation iguqula abathengisi bansuku zonke babe ngamaqhawe amakhulu angenisa imali. Ipulatifomu labo lokuzenzekelayo lokumaketha linikeza ukumaketha nge-imeyili, ukukhiqizwa okuholayo, ukuphathwa kokuhola, ukuqondanisa kokuthengisa nokubika kwe-ROI.
Izicelo Zokumaketha zeTeradata - Finyelela ubugagu bokumaketha, qonda amakhasimende njengabantu ngabodwana, futhi wenze ukuxhumana okunamandla kwedijithali kuso sonke isiteshi ngezicelo Zokumaketha zeTeradata.
I-Marketing Automation Insider nayo kukhipha izindleko ezijwayelekile zokulayisense, eyehlile njengoba isibalo sabancintisana sinyukile. Ungaqhathanisa wonke amathuluzi amakhulu wokuzenzekelayo wokumaketha kumasekhondi ayi-10 ku-Marketing Automation Insider.
Qhathanisa Amathuluzi Okumaketha Wokumaketha
Tags: I-Act-Onisoftware yokwenzai-actonisoftware ye-actonadobei-aprimokucofeeloquangqoUGenoongobandlululoindawoi-hubspot iyasebenzaukugeleza komsebenzi kwe-hubspotIBMizixazululo ze-ibm zokumakethaibm silverpopibm unicaInfusionsoftnokukhanyaumabhebhanaimaketheukumaketha okuzenzakalelayo ngaphakathiukumakethaumabhebhanamarketo isixuku-Microsoftukumaketha kwe-microsoft dynamicsneolaneumabhebhanaOracleushwelekuyasebenzaukukhuphuka kokumaketha okuzenzakalelayosalesforcei-salesforce pardotukuthengisaI-SilverPopteradataIzicelo zokumaketha ze-teradataUnicawhatsphi
Jul 20, 2016 ku-5: 13 AM
Ukonakala okumnandi komlando wokumaketha okuzenzakalelayo futhi kuyathakazelisa ukubona ukuthi sesihambe kangakanani.
Uhlu olukhulu lwamasoftware aphezulu wokukhangisa ezentengiso.Ngiyayithanda i-infusionsoft kakhulu ngenxa yezici ezinhle eziyinikezayo.
ISalesforce ikhule kakhulu ngokuthola izinkampani eziningi.